वैवाहिक जीवनमा वा प्रेमी प्रेमीकाबिच खटपट आएर समस्यामा हुनुहुन्छ ? यसरी गर्न सकिन्छ सहजै समाधान – Etajakhabar
वैवाहिक जीवनमा वा प्रेमी प्रेमीकाबिच खटपट आएर समस्यामा हुनुहुन्छ ? यसरी गर्न सकिन्छ सहजै समाधान
डा. नरेन्द्रसिंह ठगुन्ना अध्यक्ष, मनोविज्ञान सम्प्रदाय नेपाल
के हो युगल मनोविमर्श ? युगल ९जोडी० मनोविमर्शबारे निकै कमलाई थाहा हुन सक्छ । युगल ९जोडी० मनोविमर्शलाई पहिला वैवाहिक थेरापी वा वैवाहिक परामर्श पनि भनिन्थ्यो । वैवाहिक जीवनमा आएको खटपट र समस्यालाई दूर गरी जोडीबीच सुमधुर सम्बन्ध कायम गर्ने कार्यलाई युगल मनोविमर्श भनिन्छ । अझ भन्दा दाम्पत्य जीवनमा श्रीमान् र श्रीमतीबीचको सम्बन्धबारे बुझ्न, एक–अर्काप्रतिको निराशा, समस्या र तनावको कारण पत्ता लगाउने युगल विमर्शको मुख्य उद्देश्य हुन्छ ।
कहिले गर्ने युगल मनोविमर्श ? सम्बन्ध, ऋण वा गोप्यता भंगका कारण भरोसा र विश्वासमा समस्या उत्पन्न भएको छ भने यस्तो परामर्शको आवश्यकता पर्न सक्छ । कुराकानीका क्रममा असह्य रिस उठ्ने, छुट्टिन मन लाग्ने, छोडपत्रलाई एक मात्र विकल्प देख्न थाले पनि विमर्शको आवश्यकता पर्न सक्छ । शारीरिक सम्पर्कमा आनन्दित नहुनु, कुनै पनि विषयमा अनिच्छा हुने भएमा पनि मनोविमर्शले काम गर्न सक्छ ।नयाँ पत्रिकाबाट
एक–अर्काबीच छलफल कम हुनु वा आशा गर्न छाड्नु । विभिन्न तनाव उत्पन्न भई सम्बन्ध जटिल मोडमा पुग्नु । शारीरिक रोगका कारण सम्बन्धमा दरार उत्पन्न हुनु । बच्चाका विषयमा समस्या देखिन थाल्नु । उदासीनता बढ्दै गएपछि एक्लै बस्न रुचाउन थाल्नु । बाह्य दबाबका कारण एक–अर्काप्रति नकारात्मक भावना उत्पन्न हुनु । बच्चाहरू घर छोडेर टाढा गएमा । युगल मनोविमर्शको काम
युगल मनोविमर्शले जोडीमा उत्पन्न भएको विनाशकारी ढाँचाको पहिचान र सम्बोधन गर्ने । एक–अर्काबीचको द्वन्द्व र सञ्चारमा सुधार ल्याउने । नयाँ शिराबाट सम्बन्धको सुरुवात गर्ने । व्यवहारमा आएको परिवर्तनको प्रभाव र हानि पहिचान गर्ने । सफल सम्बन्ध स्थापित गर्ने । ‘अनि पर्छ आवश्यकता
दम्पतीबीचको सञ्चार समाप्त भएमा शारीरिक सम्बन्ध नराख्ने अवस्थामा पुगेमा वा समस्या उत्पन्न भएमा । विनाकारण झगडा र तर्क–वितर्क भएमा । एक–अर्काप्रति हिंसात्मक देखिन थालेमा । डिप्रेसन वा अन्य स्वास्थ्य समस्या आएमा । एक–अर्काबीच विश्वासको बन्धन तोडिएमा ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, मंसिर २०, २०७४ समय: ९:०२:५६